Ireo rindranasa 10 izay mety tsy ho hita amin'ny iPad 2 | Vaovao IPhone
Ireo rindranasa 10 izay mety tsy ho hita amin'ny iPad 2-ko
Volana vitsivitsy lasa izay I Luis namako dia nilaza taminao hoe inona no fampiharana tsara indrindra ho an'ny iPad ho azy ary ireo izay tena ilaina amin'ny andavan'andro. Androany, holazaiko aminao hoe iza avy ireo rindranasa 10 izay tsy azo hadinoina amin'ny iPad faharoa, toy ny nataon'ny mpiara-miasa tamiko tamin'ny androny. Ireo rindranasa ireo izay tsy tokony hisy tsy hita tampoka amin'ny iPad-ko, fa afaka manome hevitra ianao amin'ny faran'ny lahatsoratra milaza amin'ny vondrom-piarahamonina iray manontolo izay ny rindranasao izay tsy tokony hanjavona amin'ny iPad-nao. Sahy ve ianao?
Hanomboka amin'ny safidiko aho:
Izaho no niandraikitra ny fanaovana ny Review an'ny mpanjifa Twitter ho an'ny iOS fa isaky ny fanavaozana dia ahitantsika ireo fiasa vaovao nahatonga ny mpanjifa ho tsara bika kokoa: manampy fampandrenesana fanosehana, fisehoan-javatra vaovao ary koa endrika vaovao izay mahatonga an'i Twitterrific ho mpanjifa Twitter tonga lafatra ho an'ny iPad-ko.
Taorian'ny fanidiana ny Google Reader amin'ny herinandro ho avy dia tsy maintsy mahita mpamaky RSS aho handraisana vaovao isan-karazany ary ny fampiharana izay maharesy lahatra ahy indrindra dia ny Feedly, izay ahafahantsika mahita ny vaovao amin'ny fomba mahafinaritra be (amin'ny endrika an'ny gazety) nanampy ny lisitra RSS-ko. Io dia ahafahantsika mizara azy amin'ny tambajotra sosialy marobe toa an'i Google+, Twitter na mandefa izany amin'ny mailaka anay mba hanao lahatsoratra, ohatra.
Efa notantaraiko anao momba ity fampiharana ity ao amin'ny Actualidad iPad. Izy io dia mitovy amin'ny PhotoSync miaraka amina tanjona iray ihany: ny mamindra sary avy amin'ny iPad mankany amin'ny solosaintsika noho ny fitaovantsika sy ny vavahady manokatra ny iPad amin'ny tamba-jotra Wi-Fi izay ifandraisantsika. Na dia indraindray aza tsy maintsy manakatona ny fampiharana multitasking ianao, miaraka amin'ny fanavaozana vaovao dia mihatsara kokoa ny endrika ary tsy hianjera toy ny teo aloha. Ny fanaovana lahatsoratra ao amin'ny Actualidad iPad no tena fampiharana ao amin'ny iPad-ko.
Ny antontan-taratasy sy fampidinana mpitantana tsara indrindra amin'ny iPad. Io dia ahafahantsika mitahiry ny zava-drehetra ao anaty ny rindrambaiko miaraka amin'ny fahafaha-manisy teny miafina mba hialana amin'ny olana amin'ny fisie… Ary koa amin'ny mpilalao tafiditra ao amin'ilay rindrambaiko dia afaka mihaino hira sy audios isika nefa tsy mamela ilay fampiharana mihitsy. Zavatra iray hafa ampiasaiko be dia be ny fahafaha misintona zavatra ao anaty Documents mamela ahy hitahiry anaty lahatahiry ireo rakitra rehetra alaiko amin'ny iPad-ko.
Ny famantaranandro miambina amin'ny famohazana ahy isa-maraina amin'ny alàlan'ny radio. Afaka mihaino onjam-peo an'arivony amin'ny alàlan'ny tamba-jotra Wi-Fi na tamba-jotra data ananantsika amin'ny iPad izahay. Hatramin'ny nividianako ny fampiharana PRO dia heveriko fa ampiasaiko loatra izany mba hifohazako maraina na hihainoana ny lalao ligy amin'ny asabotsy sy alahady na ny ligin'ady amin'ny alarobia (toy ny efa niseho tamin'i Barça io alarobia io). Manoro hevitra an'ity rindranasa ity aho (farafaharatsiny ny Lite) satria tsy handiso fanantenana anao izany.
Sisan'ny fampiharana fanovana sary. Amin'ireo rehetra fantatro dia hifikitra amin'ity iray hitako andro vitsivitsy lasa izay ity aho. Io dia ahafahantsika manao fanovana marobe amin'ny sarinay noho ny isan'ny sivana nalamin'ny sokajy. Ny vokatra azo antoka azo antoka dia avela tsy misondrotra rantsantanana. Ho fanampin'izay dia nakariko tamin'ny varotra (maimaim-poana) ary ampiasako isan-kerinandro hanovana sary izay raisiko miaraka amin'ny Nikon-ko amin'ny sary-tany.
Ny navigateur ananantsika amin'ny iOS: Safari, manana safidy maro ianao, fa ny sasany amin'izy ireo dia heveriko fa tsy mitombina. Mampiasa Safari imbetsaka aho, fa rehefa tsy ampiasaiko dia mampiasa Clear Browser aho, izay manome ahy minimalism izay tsy misy rindrambaiko manolotra ahy (amin'ny resaka navigateur). Araka ny efa nolazaiko tamin'ny androny, Clear Browser dia manana anton-javatra ara-tsosialy lehibe, izany hoe, tena tsara amin'ny Sharing amin'ny tambajotra sosialy.
Mampiasa PDF maro aho mandritra ny herinandro ary ny tena marina dia somary mankaleo ny fanontana azy ireo, noho izany dia tahiriko ao amin'ny PDF Max Pro. Azoko atao koa ny manasongadina amin'ny "phosphorescent miloko", manoratra miaraka amin'ny loko isan-karazany amin'ny stilosy, mamaky fehezanteny, tsipiho ny fehezan-teny, mamorona sary ary manorata boaty hampahatsiahivana ahy ny zavatra manan-danja izay tsy voasoratra ao amin'ny PDF. Etsy ankilany, mamela ahy hitahiry izay rehetra ao amin'ny iCloud hanana azy io koa amin'ny fitaovana iOS hafa.
Manana fialamboly kely aho: fanatanjahan-tena. Misaotra ny Score Center dia afaka mamantatra saika ny valin'ny fanatanjahan-tena rehetra eto an-tany sy ireo ekipa tadiaviko aho. Amin'ny famolavolana tena niasa, ny Score Center dia mampahafantatra ahy ny ekipa rehetra miditra amin'ny kaontiko mba hampahafantatra ahy amin'ny antsipiriany ny valin'ny lalao nilalaovan'ny ekipa tiako indrindra.
Tsy misy fetra 2
Amin'ny maha-olona ahy dia manana ny fotoana malalaka ananako koa aho ary laniko amin'ny Actualidad iPad sy amin'ny lalao amin'ny iPad-ko izany. Ny iray amin'ireo lalao tiako indrindra amin'ny iPad faharoako dia ny Infinity Blade 2, ny fitohizan'ny andiany voalohany an'ny Infinity Blade. Tsy maintsy manohy manatsara ny fiadianay, sabatra ary toetra hafa isika hahafahantsika mandresy ny mpifanandrina rehetra tonga amintsika. Miaraka amin'ny iraka maro hamitana amin'ny alàlan'ny Game Center.
Ireo no fampiharana 10 tiako indrindra amin'ny iPad-ko. Ary ianao, iza no azonao?
Fanazavana fanampiny - Ny iPad Apps 10 tiako indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ireo rindranasa 10 izay mety tsy ho hita amin'ny iPad 2-ko
Ireo fampiharana 10 alaina indrindra amin'ny iPad
Fampiharana iPad folo ho an'ny mpitantana vondrom-piarahamonina